musha Asia Jet Li Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara Yemufirimu Wemukurumbira anozivikanwa kwazvo nezita rekuti ""Jet“. Yedu Jet Li Yehuvana Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvazvo hunyanzvi hwake hwepamusoro hwekarati uye kutaridzika kwemuvhi segamba rakanaka uye rinozvininipisa. Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga nezveJet Li's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Jet Li Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga, Li Lianjie (Jet Li) akaberekwa musi we 26th weApril 1963 kuBeijing kuChina. Young Li (akafananidzirwa pasi apa) ndiye aiva muduku kuna vose vakaberekerwa namai vake Zhang Feng Lan uye kuna baba vake Li Qingquan.
Akakurira pamwe nevakoma vaviri vakuru uye vaviri vakuru hanzvadzi. Kudzidza kuti Li akauya zvakadii zvinoita kuti zvinyanye kuoma kutenda kuti iye aitova mudiki pahama 5. Yekarati prodigy uyo akarasikirwa nababa vake apo aingova makore maviri chete, akarerwa nekudzivirira naamai vake vaisamubvumidza iye kuchovha bhasikoro kana kuenda kunoshambira.
Zvakanga zvisinganzwisisiki kuti mukomana muduku uyu akasimuka pamusoro pezvipfeko kubva kuna amai vake kuti agamuchire mabasa ezvinyorwa zvinosanganisira mabasa akaoma uye akazara ehondo anonzi wushu.
Jet Li Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Li aive nemakore masere chete apo tarenda rake rekutengesa wushu rakaoma kusateerera. Saka, mhuri yake yakashata yakatsvaga kukwanisa unyanzvi hwake nekumutumira kune chikoro chakanaka ikozvino chinozivikanwa seBeijing Sports uye Practice School.
Yaiva pachikoro icho Li akaratidza kuti akanga akasiyana zvikuru newawushu. Nokudaro, akabva kumusha kwekutanga kuenda kumakwikwi akamuona achikunda nzvimbo yekutanga, achimupa mukana wekuita pamutambo wokutanga wePan-Asian-African-Latin American Table Tennis Championships.
Kuita kwake pamakwikwi kwakafemerwa nevakawanda kusanganisira Mutungamiriri Zhou Enlai uyo aisakwanisa kubatsira kurumbidza kurumbidza kwakaitwa naJet Li kuvimba kwakawanda.
Mukuda kwekutanga kwekukura kwakakura, dzidzo yekodzero yakanga isisati yanzi yakakosha kumukomana sezvo iye akanyoresa mune imwe nzvimbo yepamitambo yezemitambo yakaoma kuti azvisunge iye pachake nokuda kwezvakakurumbira zvinosvika kuuya.
Jet Li Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Nokukurumidza zvakakwana, Li akazova mufambiro wekuenda kune zvishomanana kune nyika dze45 apo akaratidza tarenda rake yemutambo kusanganisira kuratidza iwo Mutungamiri weUnited States Richard M. Nixon mu1974.
VERENGA Manny Pacquiao Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts
Unoziva here? Li akange ari mune imwe yekufamba kwakadaro akaita sumo rezvematongerwe enyika paakaona zvaifunga kuti yaiva ndege yeChiese muHawaii. Ndege yaiva chaiyo yeTaiwanese, iyo yakanyanyisa uye yakakosha kusiyana panguva iyoyo.
"KuHonolulu International Airport, zvakaitika kuti ndione ndege pamugwagwa ine zvakanyorwa kuti" China Airlines "padivi. China Airlines yaive panguva iyoyo (uye ichiripo) muridzi uye yaishandiswa nekambani yeTaiwan, asi hongu, ini ndaisazviziva izvozvo. Nekutya kukuru, ndakatanga kushevedzera, "Wow! Tarisai, ndege kubva kuChina! Ndege yekuChina! Tarisa, munhu wese! Tarira! ” Pakarepo, mumwe munhu mukuru akaisa ruoko rwake pamuromo wangu ndokuti: "Zvakwana!" Ndakakurumidza kuona kuti ndaive ndaita zvisirizvo. Ndakatya kufa. Ndakafunga kuti vangandidzosere kumba chokwadi ”.
Pakazove nekuedza kwekuedza kwakaona Jet Li achikunda iyo All-China Youth Championship, chiitiko panguva iyo akangoerekana avhara musoro ne saber. Uyu 12 ane makore-gore panguva iyoyo haana kumboziva nezvekuzvikuvadza kwake pachake sezvaaifunga kuti yaiva jirasi paaipfuurira nemabasa ekupedzisa kutanga.
1980 ndiyo gore iro Li akasiya basa kubva wushu. Kusvikira iye akasiya basa, Li akanga ari nhengo inoshingaira yemusangano wushu wekudzidzisa uyo akanga akavimbika kuna tenzi wake uye akabatsira vadzidzi vakadzidziswa vezvikoro zviduku.
Jet Li Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Achibva kune wushu, Li akafananidza mukurumbira waakawana mumutambo kumabhizimisi emagetsi kubva kuChina apo akazova akakurumbira zvikuru pakuita kutanga kwake mufirimu, Shaolin Temple (1982).
Yechipiri yakamira yakanga iri kuHong Kong uko yakasimbisa meteoric yake mukurumbira mukurumbira kuburikidza nemufirimu 'Once Upon Time in China'. Kubudirira kwake, zvisinei, kwakauya neyekutanga yeHollywood mufirimu Lethal Weapon 4 (1998).
Imwe mafirimu aive neLi anotora chikamu chemunhu ari pedyo Mel Gibson uye Danny Glover, vakafadzwa nevateereri pasi rose uye vakagadza Li pane imwe nguva kune mamwe mafirimu eHollywood. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Jet Li Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Kutanga Muwanano Ushamwari
Li ave akaroora kaviri. Tinokuudzai nezvehukama hwemhuri yake. Chokutanga chaiva chikwata chake kunekadzi anozivikanwa saHuang Qiuyan. Vaya vekare-vakaroorana vaidzidza navo kuchikoro vakatanga kufambidzana vari kuchikoro. Makumi emakore gare gare, Li achatsanangura kuti hukama hwavo hwakatanga sei nenzira inotevera:
VERENGA Lalisa Manoban Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
“Mhuri yangu yaitambura. Mhuri yake yaive yakagarika. Aigara achindichengeta. Ndozvazvakaita. Ndakanga ndisingazive chinonzi rudo. ”
Li akakwanisa kumupa mubayiro nokuda kwekunaka kwaari nekuronga kuti ave nenyeredzi mune imwe nzvimbo ye Shaolin Temple iyo yakanga yaita kuti azive.
“Paakave mukadzi anotungamira, ndakanzwa kugadzikana mupfungwa. Ndainzwa, 'ndaita basa rangu. "
Ivo vaviri vakapedzisira varoora mu1997, mubatanidzwa usina kurarama kwenguva refu kunyangwe uchikonzera kuzvarwa kwevanasikana vaviri; Si Li uye Taimi Li.
Jet Li Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Kuroora NaNina Li Chi
Achienderera mberi, Li akatanga kufambidzana nemukadzi wake aripo Nina Li Chi. Vakaroorana vakasangana vachitora seti yeDrag Fight (1989) uye vakangotanga kufambidzana makore mazhinji mushure mekurambana kwaLi naHuang Qiuyan.
Hazvina kutora nguva refu vasati varoora pa19th yaGunyana 1999. Muchato wavo unokomborerwa nevanasikana vaviri; Jane akazvarwa muna 2000 uye Jada akazvarwa muna 2003.
Jet Li Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Chikonzero Chikonzero Chokutamba Nickname
Zita rezita raLi "Jet" rakura kupfuura rake rekuita basa uye akadzokera kumazuva ake ehudiki muBeijing. Iyo yazvino yekurwa art prodigy yakapihwa zita remadunhurirwa mukucherechedza kumhanya kwake uye nyasha pakudzidziswa nechikwata cheBeijing wushu.
Iyo nick yaive yakazotevera gare gare mu1982, yakawedzerwa kuna "Li" kugadzira zita rechiso "Jet Li". Izvi zvakaitwa muPhilippines nekambani yekushambadzira yakafananidza basa raLi nendege, iyo "inosimuka" nekukurumidza. Nekudaro, iro zita rekuti Jet Li rakatanga kuoneka pama posita emamuvhi shure kwaizvozvo.
Jet Li Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Tsunami Inokurudzira Upenzi
Kunyange zvazvo Li aimbove ane goridhe yemwoyo, haana kumbove nechikonzero chakamanikidzika chokugadzira sangano rake rehupenyu kusvikira aona chiitiko che tsunami mu2004 kuMaldives (maketani ezvitsuwa muIndia Ocean), South Asia.
Li aive pazororo nemukadzi wake nemwanasikana kuMaldives pakaitika kudengenyeka muIndian Ocean kwakakonzera tsunami dzakazara pachiwi. Li anoyeuka kutambura kwakaita mhuri kusvika kuzvidziro zvavo mumvura yemusango apo mwanasikana wake akapotsa atakurwa nemafashama asi akaponeswa nevamwe.
“Ruzivo rwekupona mumhirizhonga uye nekuona kuparara kwakakonzerwa nenjodzi iyi kwakandichinja zvachose. Munguva yekudzoreredza muMaldives, ndakabayiwa moyo kuona kuti munhu wese aikwanisa kubatsira nekuzvidira akapinda mukati. Hakuna kana mumwechete akambobvunza kuti "Unobva kupi?" kana kuti "Uri wenyika ipi?" Ndakazvibvunza kuti: zvaiita here kuti mweya iwoyo urambe uchirarama uye uchidarika miganhu yechinyakare kubatsira vanhu zvachose?
VERENGA Jackie Chan Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Nekudaro, Li akatora zororo kubva pakuita kuitira kuti atarise pakuvaka yake yega philanthropic sangano rinozivikanwa se "Iyo Imwe Foundation". Iyo nheyo inotarisana nekugadzira chikuva chekusimudzira hunyanzvi muChina nekunze pamwe nekupa rubatsiro rwekubatsira vanhu nemasangano anobatsira avo vanoshaya.
Jet Li Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Health Status
Nyika yakavhiringidzika muna 2018 kana chinyorwa cheLi chikaonekwa zvose zviri zviviri uye kune dzimwe nyika.
Ndiyo Jet Li here? Yakabvongodza mifananidzo yeActor muTibet mafuta ekufungidzira pamusoro pehutano hwake husina kunaka https://t.co/8JEM0gtF0f pic.twitter.com/23OG2MN65f
- Iyo Straits Nguva (@STcom) Dai 20, 2018
Mufananidzo uyu wakasimudza fungidziro nezvehutano hwaLi wakataurwa nemaneja wake, Steven Chasman akautsanangura se "mufananidzo wakashata wemunhu ane makore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa". Iye, zvakadaro, akaburitsa pachena kuti mutambi anga achirwara kwenguva refu nechirwere chisingaperi.
"Ane hyperthyroidism yave achishanda nayo kwemakore anoda kusvika 10. Haisi chinhu chinotyisa upenyu uye ari kuita nayo. "
Mavhiki apfuura Li akaonga vateveri vake nekuda kwekutya kwavo vachiona kuti ari kuita zvakanaka uye achishanda mune mamwe mapurani.
Ndinoda kutenda vateveri vangu vese vakaratidza kunetsekana nezve hutano hwangu. Ndiri kuita zvakanaka uye ndinonzwa kufara! Ndiri kufara…
Jet Li Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Jet Li mutambi wekutanga anotambura neanoona mafirimu mumafirimu ake kunyangwe akaroora kaviri. Maererano naye;
"Nguva dzose pandinozotanga firimu ini handizivi kuti ndingataurirana sei nevakadzi vanotungamira. Ini ndiri nani kutaurira, saka handizivi kutaura naye. "
Chero chii icho icho Li asingasviki nehukama hwevanhu, anozviitira iyo mukufungisisa kwake kwakadzika kunomubatsira kukunda matambudziko ezuva nezuva ehupenyu.
Hazvishamisi kuti akaita mafirimu matatu anofambisa zvakadzika mafirosofi kunyika. Iwo mafirimu anosanganisira Asingatyi (Muvengi mukuru ndiwe) Unleashed (Mhirizhonga haimbo gadziriso) uye Hero (Kutambura kwemunhu mumwe chete hakuna kukosha sekutambura kwerudzi rwose).
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Jet Li Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!